७ वर्षको बच्चालाई १० अर्बको चिठ्ठा ! – Khabarhouse
७ वर्षको बच्चालाई १० अर्बको चिठ्ठा !
Khabar house | ६ चैत्र २०७६, बिहीबार १०:४९ | Comments
एजेन्सी । भनिन्छ, भगवानले जब दिन्छन् दिल खोलेर दिन्छन् । यस्तै भएको एक ७ वर्षको बच्चालाई । दुबईमा बसोबास गरिरहेका उनलाई १० लाख डलर अर्थात १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढिको चिठ्ठा परेको छ। कोरोनाको त्रासमा विश्व नै रुम ल्लिएका बेला दुबईमा बस्ने भारतीय मुलका बालकलाई ठूलो धनराशिको चिठ्ठा परेको हो ।
कक्षा १ मा पढ्ने ककपिलराज कनक राजलाई पहिलो पटक किनेको टिकट बाटै यतिठूलो रकमको चिठ्टा परेको हो । उनको परिवार भारतको तमिलनाडुबाट रहेको र दुबईको अजमनमा पछिल्लो २७ वर्ष देखि बसाेबास गरिरहेका थिए । चिठ्ठामा जितेको रकमले अजमनमा घर बनाउने र व्यवसाय गर्ने कनकराजले बताएका छन् ।
उनले सिरिज नम्बर ३२७ भएको ४२३४ नम्बरको टिकट काटेका थिए । उनको परिवारले चिठ्ठा जितेको कुरा सुरुमा पत्याउन गाह्रो भएको बताएका छन्। दुबईमा बसोबास गरिरहेका एक ७ वर्षको बच्चालाई १० लाख डलर अर्थात १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढिको चिठ्ठा परेको हो ।